Amụma nzuzo - Element Society
agba mbọ iji chebe nzuzo gị. Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu gbasara iji Personal Data gị ma anyị ga-eji obi ụtọ nyere gị aka.
Site n'iji saịtị a ma ọ bụ / na ọrụ anyị, ị kwenyere na nhazi nke Personal Data gị dịka akọwara na Nzuzo Nzuzo a.
Nkọwa eji eme ihe a
Ụkpụrụ nchedo data anyị na-agbaso
Kedu ikike ị nwere gbasara Personal Data
Ihe Data onwe anyị na-ezukọta gbasara gị
Kedu otu anyi si eji Data Nkeonwe
Ndị ọzọ nwere ohere na Personal Data
Otu anyi si echedo data gi
Ozi banyere kuki
Data nkeonwe - ozi obula gbasara onye anumanu mara ma obu onye a puru igosi.
nhazi - ọrụ ọ bụla ma ọ bụ setịpụrụ arụmọrụ nke a rụrụ na Personal Data ma ọ bụ na setị nke Personal Data.
Isi okwu data - onye bu mmadu nke anaziga data onwe ya.
Child - madu nke no n'okpuru 16 afọ.
Anyị / anyị (ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị) -
Iwu Nchekwa Data
Anyị na-ekwe nkwa ịgbaso usoro nchekwa nchedo ndị a:
Usoro nhazi bu iwu kwadoro, nke ziri ezi, uzo. Ihe nhazi anyị nwere ihe iwu kwadoro. Anyị na-eche banyere ikike gị mgbe niile tupu ịhazi Personal Data. Anyị ga-enye gị ozi gbasara nhazi mgbe ị rịọrọ.
Nhazi adighi oke na nzube. Ihe omume anyị na-eme ka ebumnuche nke Data Personal gathered.
A na-eme nhazi na obere data. Anyị na-ezukọ ma na-akwado ọnụọgụ nke Personal Data achọrọ maka nzube ọ bụla.
Nhazi na ejedebe oge. Anyị agaghị echekwa data onwe gị maka ogologo oge karịa mkpa.
Anyị ga-eme ike anyị niile iji chọpụta na data ziri ezi.
Anyị ga-eme ike anyị niile iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe na nzuzo nke data.
Ikike ikike nke data
Isiokwu data nwere ikike ndị a:
Ikike inweta ozi - nke pụtara na ị ghaghị ịmara ma edobere Personal Data gị; ihe data ana achikota, site na ebe o nwetara na ihe kpatara ya na onye esitere na ya.
Ikike ịnweta - nke pụtara na ị nwere ikikere ịnweta data anakọtara site na / banyere gị. Nke a na-agụnye ikikere gị ịrịọ maka ma nweta otu nke Data Data gị.
Ikike imezi - nke pụtara na ị nwere ikikere ịrịọ nhazigharị ma ọ bụ nkwụsị nke Personal Data nke na-ezighị ezi ma ọ bụ ezughị oke.
Ikike ịkwụsị - nke pụtara na ọnọdụ ụfọdụ ị nwere ike ịrịọ ka ehichapu data gị onwe gị na ndekọ anyị.
Ikike iji gbochie nhazi - nke pụtara ebe ọnọdụ ụfọdụ dị, ị nwere ikike igbochi nhazi nke Personal Data.
Right to object to processing - nke pụtara na ụfọdụ ikpe ị nwere ikike ịjụ Nhazi nke Personal Data, dịka ọmụmaatụ n'okwu ikpeahịa ziri ezi.
Right to object to Processing Automation - nke pụtara na ị nwere ikike ịjụ nhazi usoro akpaaka, gụnyere nyocha; na ịghara ịdabere na mkpebi dapụtara naanị na nhazi usoro akpaaka. Ikike a ị nwere ike igosipụta mgbe ọ bụla nsonaazụ nke na-akpata mmetụta iwu gbasara ma ọ bụ na-emetụ n'ahụ gị na-emetụta gị.
Ikike nke data data - i nwere ikike iji nweta data nkeonwe gị n'ụdị nhazi nke ngwaọrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, dịka nnyefe ozugbo site na otu Nhazi na onye ọzọ.
Ikike ime mkpesa - ọ bụrụ na anyị ajụ arịrịọ gị n'okpuru Rights nke Access, anyị ga-enye gị ihe kpatara kpatara ya. Ọ bụrụ na ịchọọghị afọ ojuju maka ụzọ e si edozi arịrịọ gị biko kpọtụrụ anyị.
Right maka enyemaka nke ikike nlekọta - nke pụtara na ị nwere ikike maka enyemaka nke onye nlekọta nchịkwa na ikike maka usoro iwu ndị ọzọ dịka ịkwu maka emebi.
Ikike ịhapụ nkwenye - ị nwere ikike ịhapụ nkwenye ọ bụla enyere maka nhazi nke Personal Data gị.
Data anyị na-achịkọta
Ozi ị nyere anyị
Nke a nwere ike ịbụ adreesị ozi-e gị, aha, adreesị ịgba ụgwọ, adreesị ụlọ wdg. - gụnyere ozi dị mkpa maka ịnye gị ngwaahịa / ọrụ ma ọ bụ iji mee ka ahụmịhe gị na ndị ahịa anyị. Anyị na-echekwa ozi ị nyere anyị ka ị wee kwuo ma ọ bụ rụọ ọrụ ndị ọzọ na weebụsaịtị. Ozi a na-agụnye, dịka ọmụmaatụ, aha gị na adreesị ozi-e.
Ozi na-akpaghị aka anakọtara gbasara gị
Nke a na-agụnye ozi nke kuki na ngwaọrụ ndị ọzọ na-echekwa. Dịka ọmụmaatụ, ozi ịzụ ahịa ịzụ ahịa gị, adreesị IP gị, akụkọ ịzụ ahịa gị (ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla) wdg. A na-eji ozi a iji meziwanye ahụmịhe ọkachamara gị. Mgbe ị na-eji ọrụ anyị ma ọ bụ na-ele ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ anyị, ọrụ gị nwere ike ịbanye.
Ozi sitere n'aka ndị mmekọ anyị
Anyị na-ekpokọta ozi n'aka ndị anyị tụkwasịrị obi na nkwenye na ha nwere ihe iwu kwadoro ịkọrọ anyị ozi ahụ. Nke a bụ ma ọ bụ ozi ị nyere ha ozugbo ma ọ bụ na ha ezukọtara gbasara gị na iwu ndị ọzọ. Ndepụta a bụ: NCS Trust, EFL Trust.
Ozi ndị dị n'ihu ọha
Anyị nwere ike ikpokọta ozi gbasara gị nke dị n'ihu ọha.
Anyị na - eji Data Nkeonwe gị iji:
nye anyị ọrụ anyị. Nke a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ịdenye akaụntụ gị; inye gị ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ ị rịọrọ; nye gị ihe nkwado mgbe ị rịọrọ ma soro gị na-akparịta ụka gbasara ngwaahịa na ọrụ ndị ahụ; na-ekwurịta okwu ma na-ekwurịta okwu na gị; ma na-agwa gị mgbanwe maka ọrụ ọ bụla.
mee ka ahụmịhe ndị ahịa gị dị mma;
rụọ ọrụ dị n'okpuru iwu ma ọ bụ nkwekọrịta;
iji kwurịta maka usoro ntorobịa ị na-ede ma ọ bụ nwa gị;
banyere akụkọ ihe ịga nke ọma site na usoro ntorobịa anyị;
iji kwado gị ma ọ bụ nwa gị na usoro ntorobịa
Anyị na - eji Data Nkeonwe gị mee ihe ziri ezi na / ma ọ bụ site na nkwenye gị.
Na mgbakwasị nke ịbanye nkwekọrịta ma ọ bụ ịrụ ọrụ ụgwọ ọrụ, anyị na-edozi Personal Data maka ihe ndị a:
iji mata gị;
iji nye gị ọrụ ma ọ bụ iziga / nye gị ngwaahịa;
iji kparịta ụka ma ọ bụ maka ire ere ma ọ bụ akwụkwọ edemede;
N'okpuru ezi mmasị, anyị na-hazie Data Nkeonwe Gị maka nzube ndị a:
iji zitere gị onyinye + aha (site na anyị na / ma ọ bụ ndị mmekọ anyị ahọpụtara nke ọma);
ịhazi na nyochaa isi ahịa anyị (ịzụta àgwà na akụkọ ihe mere eme) iji melite ogo, iche, na nnweta ngwaahịa / ọrụ enyere / nye;
na-eduzi ajụjụ gbasara inweta afọ ojuju nke ndị ahịa;
Ọ bụrụhaala na ị gwaghị anyị na nke ọzọ, anyị na-atụle ịnye gị ngwaahịa / ọrụ ndị yiri ya ma ọ bụ otu na omume ịzụta ihe / akụkọ nchọgharị iji bụrụ mmasị anyị.
Site na nkwenye gị, anyị na-ahazi Data Nkeonwe Gị maka nzube ndị a:
iziga gị akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi (site na anyị na / ma ọ bụ ndị mmekọ anyị ahọpụtara nke ọma);
maka nzube ndị ọzọ anyị rịọrọ gị nkwenye maka;
Anyị na-edozi data nkeonwe gị iji mezuo ọrụ na-ebute site na iwu na / ma ọ bụ jiri Personal Data maka nhọrọ ndị iwu nyere. Anyị na-edebe ikike ezigara onwe onye data Personal Data gbakọtara na iji data dị otú ahụ. Anyị ga-eji data na-abụghị nke Usoro a naanị mgbe ọ na-amaghị. Anyị anaghị echekwa ozi ịgba ụgwọ dị ka nkọwa kaadị akwụmụgwọ. Anyị ga-echekwa ozi mkpọsa ndị ọzọ zukọtara gbasara gị maka oge ọ bụla dị mkpa maka ebumnuche akaụntụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-eweta site na iwu, ma ọ bụghị karịa afọ 5.
Anyị nwere ike ịhazi Data Nkeonwe gị maka nzube ndị ọzọ ndị a na-akpọghị ebe a, kama ha na-ejikọta na nzube mbụ nke anakọtara data. Iji mee nke a, anyị ga-achọpụta na:
njikọ dị n'etiti ebumnuche, ọnọdụ na ọdịdị nke Personal Data dị mma maka nhazi ọzọ;
Nhazi ọzọ agaghị emerụ ọdịmma gị na
enwere nchedo kwesịrị ekwesị maka nhazi.
Anyị ga-agwa gị maka nhazi na nzube ọzọ.
Ndị ọzọ nwere ike ịnweta Personal Data
Anyị adịghị eso ndị na-amabughị onwe gị kerịta Personal Data gị. Personal data banyere gị bụ na ụfọdụ ụfọdụ nyere ndị mmekọ anyị tụkwasịrị obi ka ha wee mee ka ọrụ gị nwee ike ma ọ bụ mee ka ahụmịhe ndị ahịa gị dịkwuo mma. Anyị na-ekekọrịta data gị na:
Ndị mmekọ anyị na-arụ ọrụ:
Paypal maka ịkwụ ụgwọ. A gwara gị ka usoro a na-eme.
Usoro ihe omume anyị:
NCS Trust - maka usoro NCS naanị.
EFL Trust - maka usoro NCS naanị.
Anyị na-arụ ọrụ na ndị mmekọ nhazi nke nwere ike ịhụ na nchekwa zuru oke na Personal Data. Anyị na-egosi Personal Data gị na ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọrụ obodo mgbe anyị ji iwu kwadoro ime ya. Anyị nwere ike igosipụta Data nkeonwe gị na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ikwenyela ya maọbụ ọ bụrụ na e nwere ihe iwu ọzọ.
Anyị na-eme ike anyị iji debe Personal Data nchekwa. Anyị na-eji usoro nchedo dị mma maka nkwurịta okwu na ịnyefe data (dị ka HTTPS). Anyị na-eji aha na ịdebanye aha na ebe kwesịrị ekwesị. Anyị nyochaa usoro anyị maka nhụsianya na ọgụ.
Ọ bụ ezie na anyị na-anwa anyị kacha mma, anyị enweghị ike ikwu na nchebe nke ozi. Otú ọ dị, anyị na-ekwe nkwa ịkwado ndị ọchịchị kwesịrị ekwesị banyere nbibi data. Anyị ga-agwa gị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe iyi egwu nke ikike ma ọ bụ ọdịmma gị. Anyị ga-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji gbochie mgbochi nche ma nyere ndị ọchịchị aka ma ọ bụrụ na mmebi ọ bụla emee.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na anyị, rịba ama na ị ga-edebe aha njirimara na paswọọdụ gị.
Anyị ebughị iwebata ma ọ bụ jiri nlezianya nakọta ozi site na ụmụaka n'okpuru afọ 14 site na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Dị ka onye ntorobịa na-eme ebere, ọ dị mkpa ịnakọta ozi gbasara ndị na-eto eto nwere mmasị na, ma ọ bụ ịga ihe omume anyị. A na-akpọtụrụ ndị nne na nna maka data a mgbe e nyere data nna.
Kuki na teknụzụ ndị ọzọ anyị na-eji
Anyị na-eji kuki na / ma ọ bụ teknụzụ yiri ya iji nyochaa omume ndị ahịa, nyefee weebụsaịtị, soro ndị ọrụ ọrụ, na ịnakọta ozi gbasara ndị ọrụ. A na-eme nke a iji mezie ma melite ahụmahụ gị na anyị.
Kuki bụ obere ederede ederede echekwara na kọmputa gị. Kuki na-echekwa ozi nke ejiri iji nyere aka rụọ ọrụ saịtị. Naanị anyị nwere ike ịnweta kuki ndị anyị wepụtara. Ị nwere ike ijikwa kuki gị na nyocha ihe nchọgharị. Ịhọrọ iji kpochapụ kuki nwere ike igbochi iji iji ọrụ ụfọdụ.
Anyị na-eji kuki maka nzube ndị a:
Kuki ndị dị mkpa - a chọrọ kuki ndị a ka ị nwee ike iji ụfọdụ atụmatụ dị mkpa na weebụsaịtị anyị, dị ka ịbanye na. Kuki ndị a adịghị anakọta ozi ọ bụla.
Kuki na-arụ ọrụ - kuki ndị a na-enye ọrụ nke na-eji ọrụ anyị eme ihe na-adaba adaba ma na-eme ka enyekwu atụmatụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike icheta aha gị na ozi-e na ụdị nzaghachi ka ị ghara ịbanye ozi a n'oge ọzọ mgbe ị na-aza ajụjụ.
Kuki nchịkọta - ejiri kuki ndị a soro usoro na ọrụ nke weebụsaịtị na ọrụ anyị
Kuki mgbasa ozi - a na-eji kuki ndị a iji wepụta mgbasa ozi ndị dị gị mkpa na ihe gbasara gị. Na mgbakwunye, a na-eji ha emechi ọnụ ọgụgụ nke oge ị na-ahụ mgbasa ozi. A na-etinye ha na netwọk site na netwọk mgbasa ozi na ikikere onye ọrụ weebụ. Kuki ndị a na-echeta na ị gara na ebe nrụọrụ weebụ ma kọọrọ ozi ndị a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka ndị mgbasa ozi. A na-ejikarị icheta ma ọ bụ kuki kuki na ọrụ saịtị nke nzukọ ọzọ.
Ị nwere ike iwepu kuki echekwara na kọmputa gị site na mwube ihe nchọgharị gị. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ijikwa ụfọdụ kuki kuki 3rd site na iji nhazi nkwalite nzuzo optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Maka ama ọzọ gbasara kuki, gaa na allaboutcookies.org.
Anyị na-eji Analytics Google iji tụọ okporo ụzọ na weebụsaịtị anyị. Google nwere Nzuzo nke onwe ha nke ị nwere ike nyochaa Ebe a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ na nsuso site na Google Analytics, gaa na Nchịkọta nchịkọta Google Analytics.
Njikwa nlekọta maka Data na England - https://ico.org.uk - ICO - Office Commision Information
Element Society - kpọọ 0114 2999 214 iji kwurịta data.
Anyị debere ikike ime mgbanwe na Nzuzo Nzuzo a.
E mere 21 / 05 / 2018 ka ọ bụrụ mgbanwe ikpeazụ.